Rapti Khabar – Rapti Khabar
सीड्नी, मंसिर २२ सहरको भीडबाट केही पर काम र दामको चाँजोपाँजो मिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई न्यू साउथवेल्स सरकारले ‘स्कील वर्क रिजनल’ भिसाको ब्यवस्था गरेपछि अबका दिनमा सीड्नी वरपरका ओलंघन, रिचमन्ड, ब्लु माउन्टेन क्षेत्र र सेन्ट्रलकोष्ट क्षेत्र नेपाली विद्यार्थीका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्ने भएको छ। यतिखेर अस्ट्रेलियाले पीआरको विषयमा केन्द्रीय तहमा निकै कठोर खाले नीति कायम गरिरहेको […]
काठमाडौं । जहाज उडाउने पाइलट बन्न पूर्वयोग्यता के चाहिन्छ होला? यसको अध्ययन कहाँ हुन्छ होला? पाइलट बन्न पैसा कति चाहिन्छ होला? यी जिज्ञासा धेरै विद्यार्थीमा हुनसक्छ। हामीले यस्तै प्रश्न पाइलट तालिमका लागि परामर्श दिने संस्था गीता एभिएसनका अध्यक्ष तथा सौर्य एयरलाइन्स क्याप्टेन पाइलट जनक अधिकारीलाई सोधेका छौं। पाइलट अधिकारीसँग सेतोपाटीका रवीन्द्र शाहीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित […]
Posted on December 5, 2020 Author Rapti Khabar	Comment(0)
Posted on December 1, 2020 Author Rapti Khabar	Comment(0)
Posted on November 30, 2020 Author Rapti Khabar	Comment(0)
काठमाडौं, मंसिर १४ बागलुङको गल्कोटबाट वीरजंग भण्डारीसहितका ६ जना यात्रु कैलाश एयरको हेलिकोप्टरमा काठमाडौँतिर उडे। पौने एक बजेतिर हेलिकोप्टर उडेको थियो। मौसम सफा भएकाले पाइलटसँगैको अघिल्लो सिटमा बसेका भण्डारी हिमाल, ताल, जंगलको मनोरम दृश्यहरुको भिडियो खिचिरहेका थिए। तर, उडेको केहीबेरमै हेलिकोप्टरमा चरा ठोक्कियो। दुर्घटना हुँदा अब बाँचिदैन भन्ने लागेको भण्डारी बताउँछन्। ‘म भिडियो खिच्नमै व्यस्त […]